ဆေးပညာဆိုင်ရာ Archives - Page3of 30 - BuzzFeed Myanmar
အဓမ္မပြုကျင့် ခံရပြီးရင် ကိုယ်ဝန် ရမသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အဓမ္မပြုကျင့်မှု တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ဖို့ (Prevention) နဲ့၊ ဖြစ်လာခဲ့ရင် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ (Response) ဆိုတဲ့ အပိုင်း၂ပိုင်းရှိပါတယ်၊၊ ကာကွယ်ဖို့ဟာ လတ်တလောအနေအထားအရ ခက်ခဲနေသေးတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကိုယ်ဝန်ရတာလို၊ ရောဂါပိုးတွေကူးစက်တာလို နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်မလာအောင်တော့ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်၊၊
၁၁ နှစ် အရွယ် ကောင်လေး ရဲ့ လိင်အင်္ဂါ မှာ ထည့်ထားတဲ့ ဘောစိ ဂေါ်လီ ၂၆ လုံးကို ဆရာဝန် တွေ ခွဲထုတ်ဖယ်ရှား
လူတိုင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သဘာဝဖြစ်စဉ်သာ ကောင်းမွန်ညီညွတ်တဲ့ ကျန်းမာမှု ကို ဖြစ်ပေးစေတာဖြစ်ပြီး ခန္ဓာအတွင်း သဘာဎ မဟုတ်တဲ့ အရာတွေ အစားထိုးလုပ်ဆောင်မှုက ဆိုးကျိုးသာများတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့ 11 နှစ်အရွယ် Zhejiang ဆိုတဲ့ တရုတ်ပြည်အနောက်ပိုင်းက ဆိပ်ကမ်းဘက်က အလုပ်သမားကောင်လေးဟာ ကစားစရာဖြစ်တဲ့ သံလိုက် ဘောစိလေးတွေကို သူ့ရဲ့ လိင်အင်္ဂါ အတွင်း ခွဲံထည့်ပြီး လပိုင်းအကြာမှာ ဆေးရုံ ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မွေးနေ့ သောကြာ ၊တနလာင်္ ကေသာ ဆံဖြတ်ပြုအပ်သလား ခေါင်းလျှော် သင့်သလား
တစ်နေ့သော ညနေစောင်းတွင် ဇီဝကတစ်ယောက် ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဟိုသည်ငေးနေခိုက် ဝတ်ဆန် ဆိုသည့် သူငယ်မတစ်ယောက် ရောက်လာ၏ ။ဝတ်ဆန် ။ ။ ဆရာ ရေ ၊ခုတလော ညီမ ရေချိုး ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်း အအေးမိနေတာ ပုံမှန်ပဲလား ဆရာ? ရောဂါကြီးကြီးမားမား ဖြစ်မှာစိုးလို့ ။
ဇီဝက ။ ။ ဟာ ၊ညည်းကတော့ လုပ်တော့မယ်။ ရေကို တစ်နေ့ဘယ်နှကြိမ်ချိုးနေလဲ ။ခုပဲဆောင်းတွင်းထဲ ဝင်နေပြီ ။
ဝတ်ဆန် ။ ။ ဟီး သိပ်မများပါဘူး ၊ဆရာ ။တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက်ပါပဲ ။
ရိုးရိုးမွေးခြင်း နှင့် ခွဲမွေးခြင်းတို့ ၏ အားသာချက်၊ အားနဲချက်များ
ကလေး တွေအတွက် လူ့လောကကို ဝင်လာဖို့ နည်းလမ်း၂သွယ်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး အနေနဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နေရင် ရိုးရိုးမွေးလို့ရသလို ကျန်းမာရေး အားနဲချက် ရှိနေ ရင်တော့ ခွဲမွေး ရလေ့ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ မိခင် ရော ကလေး ပါ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အသက်ရှင် သန်နေဖို့ပါပဲ။
သူငယ်နာအပြင်တတ်ဆိုမိဘတွေသိနိုင်ပေမဲ့သူငယ်နာကိုယ်တိုးဆိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါဘူး။မိဘတွေအနေနဲ့အရွယ်မတိုင်မှီကိုယ့်ရင်သွေးငယ်တွေအကြွေမစောအောင်မွေးစအရွယ်မှလည်းကောင်း သူငယ်နာဖြစ်နေချင်းသူငယ်နာတတ်နေချိန်မှာတောင်ချက်ချင်းကောင်းစေနိုင်သော အစွမ်းရှိသည့်အပင်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ကြိုတငိကာကွယ်ချင်းကကုသချင်းထက်ထိရောက်သည်မို့ကလေးငယ်တွေကိုမွေးကာစအရွယ်တည်းက ဂမုန်းတိမ်ပြာဥ လေးကိုအနည်းငယ်သွေး၍ခွံပေးထားခြင်းဖြင့်မိမိရင်သွေးငယ်တွေအတွက်သူငယ်နာကင်းဝေးနိုင်သလိုကျန်းမာစေနိုင်ပါသည်။
အိပ်မပျော်တော့ရော ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဖြစ်တာပေါ့။ အိပ်မပျော်တာများရင် အိပ်လို့မရတာများရင် Short-Term Memory (ရေတိုမှတ်ဥာဏ်) Long-Term Memory (ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်) ချို့ယွင်းလာနိုင်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့ကို ၈ နာရီလောက် အိပ်ရမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ကျွန်မတို့တွေရဲ့ အိပ်ချိန်မမှန်တာတွေက အဓိကပြဿနာပါ။ အိပ်မပျော်လို့ ဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်နဲ့ မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ပျော်တတ်တာကလည်း ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသလို၊ အိပ်ရေးပျက်တာကလည်း ကိုလက်စထရောများစေပါတယ်။
အိပ်မပျော်တာများလာလို့ ဒီကနေ့ခေတ်မှာ ဆေးဝါးတွေမှီဝဲလာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည်အတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။ အိပ်မပျော်တာတွေကို သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်း အသားလေး ဖြူအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ???
အသားအရေ ညိုမည်းမှုကို ဘယ်သူမှ မလိုချင်ကြပါဘူး ။ မျိုးရိုးဗီဇအရ အသားမည်းသူ များကိုတော့ အပြစ်ပြောလို့ မရဘူးပေါ့နော် ။ သို့သော် စိုစိုပြေပြေမည်းခြင်းနှင့် ခြောက်ကပ်ပြီးမည်းခြင်းကတော့ မတူပါဘူး
ဆီးချို ဖြစ်​တာနှစ်​၂၀ ရှိပြီ သူအ​မေ ​ပျောက်​တဲ့အတွက်​​ဆေးနည်းဒါနပြုတာပါ။ ဤ​ဆေးနည်းကိုဖြန့်​​ဝေပါတယ်​ ..!
ဆီးချို ဖြစ်​တာနှစ်​၂၀ ရှိပြီ သူအ​မေ ​ပျောက်​တဲ့အတွက်​​ဆေးနည်းဒါနပြုတာပါ။
ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် အထူး အဆုတ်သန့်စင်နည်း …!
ဆေးလိပ်သောက်လို့ အဆုတ်ပျက်စီးမှာ သိသော်လည်း ဖြတ်ရခက်တာကြောင့် သောက်အမှန်တကယ် ရောဂါ မခံစားရသရွေ့တော့ ဆေးလိပ်သောက်တာကို ရပ်တန့်နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး